लिनक्सको लागि CD र DVD जलाउन नेरोको दुई विकल्पहरू लिनक्सबाट
लिनक्सको लागि सीडीहरू र डीभीडीहरू जलाउन NERO का लागि दुई विकल्पहरू
AnaGaby_Clau | | aPLICACIONES, जीएनयू / लिनक्स
हामी सीडी र डिभिडि कम र कम प्रयोग गर्छौं, किनकि हामी ब्लू रे र यूएसबीमा सारिएका छौं, तर ती हाम्रो वरिपरि रहेका छन्। यो धेरै सम्भावना हुन्छ कि हामी मध्ये धेरै जनासँग वर्षौंको काम, खेल, संगीत र चलचित्रहरू यी डिस्कहरूमा ब्याक अप गरिएको छ, र धेरै व्यक्तिले यसलाई दैनिक आधारमा प्रयोग गर्दछन्।
उदाहरण को लागी, जब म सार्वजनिक सम्बन्ध मा काम गरी रहे थिए तिनीहरु पत्रकारलाई आर्थिक रुपमा आर्थिक रुपमा सहयोग पुर्‍याउन धेरै उपयोगी थिए। यो अझै पनि यी केसहरूको लागि उत्कृष्ट विकल्प हो। परिवारका सदस्य वा साथीका लागि संगीत मिक्स बनाउन पनि उपयोगी छ, किनकि केही कारहरूमा अझै सीडी प्लेयरहरू छन्। र कम्प्युटर वैज्ञानिकहरूको लागि तिनीहरू उपयोगी हुन सक्दछन् जब उनीहरूले पुरानो कम्प्युटरमा अपरेटि system प्रणाली बदल्नु पर्छ, जहाँ युएसबीले काम गर्दैन।
कारण जे भए पनि, त्यहाँ कडा सम्भावना रहेको छ आउनुहोस् वर्षौंसम्म CD / DVD ड्राइभहरू प्रयोग गर्न जारी राखौं; र ती मानिसहरु जसले ओपन सोर्स सफ्टवेयरमा माइग्रेट गरेका छन् सजिलैसँग डिस्कहरू जलाउन उपकरण प्राप्त गर्न सजिलो छ। त्यसकारण हामी तपाइँलाई केहि कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछौं, भन्दा फरक नीरो, जसले तपाइँलाई अब मद्दत गर्न सक्छ कि तपाइँसँग GNU / लिनक्स अपरेटिंग प्रणाली छ।
1.1 ब्रासेरो कसरी स्थापना गर्ने
2.1 कसरी K3b स्थापना गर्ने
GNome द्वारा डिजाइन र GNU / Linux को लागी वितरण, Brazier यसले डिस्कको विविधता सिर्जना गर्न सफा पर्याप्त GUI इन्टरफेस देखाउँदछ। जब तपाईं यसलाई पहिलो पटक खोल्नुहुन्छ, यसले तपाईंलाई अडियो, भिडियो वा डाटा डिस्क सिर्जना गर्न विकल्पहरूको श्रृ series्खलाको साथ प्रस्तुत गर्दछ; साथै तपाईं अवस्थित डिस्कहरूको १: १ प्रतिलिपिहरू पनि सक्नुहुनेछ। यसले कभर सम्पादक समावेश गर्दछ, जुन कभरहरू सिर्जना गर्ने प्रोग्रामको रूपमा उन्नत हुँदैन तर यो राम्रो छ कि योसँग यो छ। अन्त्यमा, ब्रासेरोको बारेमा सकारात्मक केहि विस्तार योसँगको इन्टरफेस हो, जसले बिभिन्न उपकरणहरूलाई छुट्टै थप्न अनुमति दिन्छ।
ब्रासेरो कसरी स्थापना गर्ने
हामी यहाँबाट ब्रासेरो डाउनलोड गर्न सक्छौं:
ब्रासेरो रिपोजिटरी (HTTP): http://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/brasero/3.12/brasero-3.12.1.tar.xz
ब्रासेरो रिपोजिटरी (FTP): ftp://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/brasero/3.12/brasero-3.12.1.tar.xz
Brasero द्वारा आश्रितहरू आवश्यक छ
gst-plugins- आधार-1.8.3, यसको उपकरण-2.0.2, libcanberra-0.30 y libnotify -0.7.6
त्यसपछि हामी स्थापना गर्दछौं Brazier तलका आदेशहरू चालु:
./configure --prefix = / usr en - सक्षम-कंपाईल-चेतावनी = होईन en - सक्षम-सीएक्सएक्स-चेतावनी = होइन & बनाउनुहोस्
अर्को प्रयोगकर्ताको रूपमा root
केडीई ब्रह्माण्डको साथ बढी पigned्क्तिबद्ध भएकाहरूका लागि, K3b (केडीई बर्न बेबी बर्न सारांश) एक उत्तम विकल्प हो। ब्रासेरो जस्तै, K3b विभिन्न प्रकारका र डिस्कहरूको ढाँचाहरूसँग उपयुक्त छ, साथ साथै यो कार्यक्रम भर प्रयोग हुने उपकरण र आदेशहरूको श्रृंखलासँग अनुकूल छ। यसले तपाइँलाई डिस्क सिर्जना गर्ने प्रक्रियामा अधिक नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ। संक्षेप मा, K3b एक धेरै राम्रो इन्टरफेस छ।
यस सफ्टवेयरको भर्खरै अपडेट भएको छैन, तर अवस्थित एक धेरै स्थिर र धेरै उपकरणहरूसँग छ। त्यसकारण धेरै जसो प्रयोगकर्ताका लागि चिन्ताको विषय हुनु हुँदैन।
कसरी K3b स्थापना गर्ने
को K3b स्थापना गर्न आवश्यकताहरू यसको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध छन्, एक पटक हामीले आवश्यक निर्भरता स्थापना गरेपछि
हामी स्रोत कोड डाउनलोड गर्दछौं K3b डाउनलोड पृष्ठ
हामी हाम्रो प्राथमिकता को निर्देशिका मा स्रोत कोड निकाल्छ:
हामी आफूले सिर्जना गरेको निर्देशिकामा परिवर्तन गर्दछौं।
# सीडी k3b-1.0
हामी कोड कन्फिगर:
# ./ कन्फिगर
K3b को अघिल्लो संस्करणको साथ उपसर्ग प्रदान गर्न आवश्यक थियो, तर नयाँ केडीई कम्पाइलन प्रणालीले यसलाई सही अनुमान गर्न सक्दछ।
कम्पाइलेसन सुरू गर्नुहोस्:
यदि अघिल्लो कमाण्डले कुनै त्रुटि फेला पार्दैन भने हामी K3b स्थापना गर्न अगाडि बढ्छौं, रूट प्रयोगकर्ताको रूपमा
# su -c "मेक स्थापना"
तपाईं अब k3b प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईंको एप्लिकेसन मेनूको मल्टिमेडिया सेक्सनमा फेला पार्न सकिन्छ
ठिकै छ, नेरोका धेरै विकल्पहरू छन्, म यो जोडीलाई राम्रो मान्दछु, तर यदि तपाईंसँग अर्को सुझाव छ भने हामी यसलाई जान्न चाहन्छौं। हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » लिनक्सको लागि सीडीहरू र डीभीडीहरू जलाउन NERO का लागि दुई विकल्पहरू
के मानिसहरू अझै नीरो प्रयोग गर्छन्?
मैले XP छोडेको कारणले गर्दा मैले उसलाई मृतको लागि छोडिदिएँ
ठिक छ, तिनीहरूले यसको प्रयोग गर्छन्, तर मलाई लाग्छ कि नेरो भन्दा पहिले नै स्वामित्व समाधानहरू छन्, यद्यपि यो अझै लोकप्रिय छ। अब नि: शुल्क सफ्टवेयरको लागि ब्रासेरो उत्कृष्ट छ
वास्तवमा हो हाहाहा, मैले उसलाई मरेका लागि पनि दिएँ, कि उनी अझै लोकप्रिय थिए, स्पष्टसँग अब म यो शंका गर्छु।
अर्कोतर्फ, अप्टिकल मिडिया पहिले नै पृष्ठभूमिमा भइरहेको छ, ब्लुरैमा पनि तपाई स्ट्रिमको माध्यमबाट फिल्महरू हेर्न सक्नुहुनेछ। व्यक्तिगत रूपमा, म पहिले नै USB, SD र अन्य चीजहरूको लागि ढाँचा गर्न र धेरै चीजहरूको लागि विकल्प गर्दछु।
राम्रो लेख, निश्चित रूपमा k3b अधिक पूर्ण 🙂
मेरा बर्षहरूमा जहाँ मैले एक्सचेन्ज एक्सडीको लागि धेरै डिभिडि जलाएँ, म धेरै के k बी प्रयोग गर्‍यो, यो एकदम उत्कृष्ट छ, किनकि म सँधै नोनोम प्रयोग गर्छु, केडी लाइब्रेरीहरूको केही कुरा स्थापना गर्न मलाई कुनै आपत्ति छैन, ब्रेजियरको साथ केही गलत थियो, म सामान्यतया DVD3 सँग असफल भएँ, त्यसैले फिक्स्ड मैले K9b प्रयोग गरें, अब यी समयमा म DVD प्रयोग गर्ने छैन र यदि केहि रेकर्ड गर्नु आवश्यक छ भने म कमाण्ड प्रयोग गर्छु।
MoDeM लाई जवाफ दिनुहोस्
म जस्तो, म सँधै K3b लाई प्राथमिकता दिन्छु ब्रासेरो भन्दा पनि GTK वातावरणमा काम गरिरहेछ ... उस्तै तरिका तिनीहरू दुबै उत्कृष्ट छन्…
हर्मेनलाई जवाफ दिनुहोस्
लिनक्सको मुनि सीडीहरू वा डीभीडीहरू बर्न गाह्रो हुन्छ (यो शेलबाट पनि गर्न सकिन्छ)। तर नेटिभ लिनक्स प्रोग्राम प्रयोग गरेर ब्लुरि recording रेकर्ड गर्नु भनेको कम्तिमा पनि जटिल भन्नु हो।
म imgburn प्रयोग गर्दछु, जुन विन्डोजको लागि हो तर लिनक्समा वाइनको साथ १००% काम गर्दछ।
Fprietog लाई जवाफ दिनुहोस्
ब्रासेरो धेरै साधारण डिस्ट्रोजमा पूर्वनिर्धारित रूपमा आउँदछ, यसले अधिक चूक बिना काम गर्दछ, तपाईं आफ्नो डिस्कमा आईएसओ जलाउन सक्नुहुन्छ र सीडी वा डीभीडीको cop०० प्रतिलिपि बनाउन सक्नुहुन्छ, K300b धेरै पूर्ण छ तर तिनीहरू मध्ये धेरैले पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्दैनन् उनीहरू अझ नयाँ समाचार ल्याउन सक्दछन्, भनेको छ। ब्रेसेरो र K3b को जुन आज पहिले नै परिचित छन्, मेमोरीमा रेकर्डिंग छिटो र सजिलो छ। चियर्स
अरिलियो जनेरियो भन्यो
म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जब म एक प्रतिलिपि बनाउँदछु (mp3 प्रारूपमा संगीतको मिक्स), म सामान्यतया (विन्डोज प्रयोग गर्ने बेला) Realplayer द्वारा गर्दछ। यसको फाइदा सीडीमा सम्पूर्ण फाइल जानकारीलाई पारित गर्नु थियो। त्यो हो, जब कार कार सीडी मा संगीत बजाइएको थियो, उदाहरण को लागी, गीत शीर्षक जानकारी देखा पर्नेछ। यी दुई प्रोग्रामहरू (ब्रासेरो र K3b), के तिनीहरू पनि त्यस्तै गर्छन्?
अरिलियो जेनेरियोलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई लाग्छ मैले विगतको यात्रा गरेको थिएँ जब यो पोष्ट पढ्दै थिए, ब्रासेरो र स्क्रिनशटहरू द्वारा पुरानो उबुन्टुको खैरो रंगको साथ।
काननलाई जवाफ दिनुहोस्
मैले सोचें कि तपाईंले यो नीरोको लागि भन्दै हुनुहुन्छ
म ब्रासेरो प्रयोग गर्दछु, यो पहिले नै उबन्टुमा संस्करण on मा छ र यसले दुबै अडियो स collection्ग्रह (पुरानो रेडियो सीडीको लागि संकुचित) बनाउन अनुमति दिन्छ जहाँ डेटा संग्रह (एमपी ० फाईलहरूको साथ) सम्म केही गीतहरू मात्र फिट हुन्छन्। दुबै केसहरूमा पूर्ण फाईलहरूको नामका साथ, यद्यपि यो रेडियो फाईलको नाम वा एमपी in मा एकीकृत ट्यागहरूको नाम पढ्नको लागि पनि निर्भर गर्दछ।
ठीक छ, मैले दुबै कार्यक्रमहरू प्रयोग गरें र ब्रासेरोसँग, जुन प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छ, मलाई केहि समस्याहरू थिए जस्तै रेकर्डि .हरू जुन पछि निर्माण गरिएको थिएन र त्यस्ता चीजहरू जुन मैले केbबीसँग सामना गर्नुपर्दैन जब यो ब्रासेरो भन्दा अलि कम सहज देखिन्छ। म K3b को साथ घाममा काल्पनिक द्वन्द्वमा रहन्छु। सबैलाई अभिवादन छ,
मार्टी Mcfly भन्यो
तपाइँ Xfburn को लागी के सोच्न चाहानुहुन्छ; यो लेख मा उल्लेख गरिएको थिएन र Xfce मा पूर्वनिर्धारित छ ... के यो उल्लेख छैन खराब छ? वा कसैले उहाँलाई चिन्दैन?
Marty Mcfly लाई जवाफ दिनुहोस्
यो कुनै पनि हिसाबले खराब छैन, यसले आधारभूत कार्यक्षमतालाई अनुमति दिन्छ (र केहि समय मैले प्रयोग गरिसकेपछि, यसले मेरो लागि काम गर्यो)।
ब्रासेरो Xfce संग काम गर्दछ? के Xfburn ले एमपी3मा एकीकृत ट्यागको जानकारी पठाउँदछ?
मलाई k3b का साथ राम्रा अनुभवहरू छन्। ब्रेजियर मलाई मनपर्दैन, तर यो सबैभन्दा खराब होइन।
मोरबीडीथलाई जवाफ दिनुहोस्
जर्ज राफेल अल्मेडा ओरेलाना भन्यो
k3b सँग ब्लु रेको रेकर्डि speed गतिको साथ समस्या छ, त्यसैले १० गुणा छिटो Xfburn छ (सिफारिस गरिएको)
जर्ज राफेल Almeida Orellana जवाफ
नमस्ते, मैले ब्रासेरोलाई #yum बाट स्थापना गरे र यसलाई चालु तर म CD जलाउन वा फाइल बचत गर्न सक्दिन।
के तपाईंहरू मध्ये कसैले मलाई यसको साथ मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ?
Xochitl लाई जवाफ दिनुहोस्
यस GPU स्क्रिप्टको साथ तपाईंको GNU / Linux को प्रदर्शनको अनुगमन गर्नुहोस्
MET 1.16 GTK3 + अनुकूलता को लागी सुधारको साथ उपलब्ध छ